ရဟန်းတော်နှင့် မာတုဂါမများ ~ .
1:44:00 PM ဆောင်းပါး No comments
ကျနော် 24-7-2014နေ့က ဆရာတော် မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) လူဝတ်လဲပြီး အိမ်ထောင်ပြုသွားတဲ့ သတင်းကို ဖတ်ရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာနဲ့ နောက်ထပ် ဒီလိုမျိုး ဆုံးရှုံးမှုတွေ မဖြစ်စေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ဒီစာကိုရေးလိုက်ရပါတယ်… ဒီစာက ရဟန်းသံဃာတော်များနဲ့ မာတုဂါမဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးများရဲ့ ဆက်ဆံရေး အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်…. ကျနော်ရေးတာအမှားပါခဲ့ရင်လဲ စေတနာအမှား လို့သတ်မှတ်ပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါခင်ဗျာ..
ကျနော်တို့ မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ရဟန်းတွေကို မိန်းမတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ ဘယ်လိုဆက်ဆံသင့်တယ်ဆိုတာ အသေအချာလမ်းညွှန်ဟောပြဆုံးမခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီလိုဟော ကြားပေးခဲ့ရသလဲလို့ သုံးသပ်ကြည့်ရရင် အရိယာဖြစ်တဲ့ ရဟန်းတွေအတွက် မာတုဂါမဆိုတဲ့ မိန်းမတွေက ပြသနာမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ပုတုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ ရဟန်းတော်တွေအတွက်ကတော့ မိန်းမတွေက အန္တရာယ်တစ်ခုပါပဲ။ အမှိုက်ကစ ပြသာဒ် မီးလောင်ဆိုသလို မဖြစ်ရလေအောင် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားခဲ့တာလို့ ယူဆပါတယ်။
တကယ်တော့ ရဟန်းဆိုပေမဲ့ ပုတုဇဉ်ရဟန်းတပါးဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ သိပ်မခြားနားပါ ဘူး။ စောင့်ထိန်းရမဲ့ သိက္ခာပုဒ်တွေကိုဖယ်လိုက်ရင် ရဟန်းတော်ဟာလဲ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒါကို မာတုဂါမဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ သေသေချာချာ သိသင့်ပြီး ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ နာမည်ကြီးလှတဲ့ တရားဟော ဓမ္မာစရိယ ဆရာတော်တွေ လူထွက်ပြီး မိန်းမယူခဲ့တာတွေ သိကြ မြင်ရ ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေက ဘာကိုပြသလဲဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေက တရားဟော ဓမ္မာစရိယ တွေ တရားဟောပြောကောင်း ပြီဆိုရင် ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် လိုက်လံ နာယူကြတာ တွေရှိပါတယ်။ ဟောတာပြောတာကောင်းလို့ ကြည်ညိုလို့ လိုက်လံ နာယူတာကနေ ရင်းနှီးခင်မင်လိုစိတ်တွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဆရာတော်တွေအနားရောက်အောင်သွားပြီး ခင်မင်ခွင့်ရင်းနှီးခွင့်ကို ရအောင်ယူ ခြေဆုပ်လက်နယ်ပြု ကုသိုလ်ယူကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလဲ အများကြီးပါ။ တစ်ချို့ဆို ကြည်ညိုလို့ဆိုပြီး ခြေစုံကို ဦးတိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ ဆရာတော်လာမယ့်လမ်းမှာ ဆံပင်ဖြန့်ခင်းပြီး ဆရာတော်ကို နင်းလျှောက်စေကာ ပူဇော်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကကြည်ညိုစိတ်နဲ့ လုပ်တာ မှန်ပေမဲ့ ဆရာတော်တွေကလဲ ပုတုဇဉ် လူသား ယောက်ျားတွေဆိုတာကို မမေ့သင့်ပါဘူး။ လိုအပ်တာထက် ရင်းနှီးလာပြီဆိုရင် သဒ္ဒါ လွန်တော့ တဏှာကျွံဆိုသလိုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ရဟန်းတော်တွေဘက်ကကြည့်ရင်လဲ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကတည်းက ကိုရင်ဝတ် စာဝါလိုက် အသက်၂၀ပြည့်ပြန်တော့ ရဟန်းခံ စာဝါလိုက်ဆိုတော့ မိန်းမအကြောင်း သိဖို့ခဲယဉ်းလှပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးနဲ့ ရဟန်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ငယ်ဖြူဆရာတော်တွေဆိုရင် မိန်းမနဲ့ပက်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံ နည်းလွန်းလှပါတယ်။ တဖက်မှာ အမျိုးသမီးတွေက ကြည်ညိုစိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကို အရမ်းရင်းနှီးပက်သက် လာတဲ့ အခါ အမျိုးသမီး ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးဝင်သွားတာနဲ့ အမှားတွေကြုံဖို့ များလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ရဟန်းတော်တွေဟာ မာတုဂါမတွေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမဖြစ်ဖို့ ရှောင်ကြဉ်ကြရပါ တယ်။ ရှောင်ကြဉ်ဖို့လဲ ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ်များ ချမှတ်ထားခြင်းရှိပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့် ရဟန်းတော်များသည် မာတုဂါမများနှင့် ထိတွေ့ခြင်း၊ တိုးဝှေ့ခြင်း၊ မပြုမိအောင် ရှောင်ကြဉ် ရပါသည်။ ရဟန်းများနှင့် မာတုဂါမတို့ ထိတွေ့တိုးဝှေ့၍ သာယာမိလျှင် အပြစ်ရှိသည်ဟု သိမှတ် ထားကြသည်။ ကာယသံသဂ္ဂ သိက္ခာ ပုဒ်အရ အာပတ်သင့်လျှင် ဂရုကအာပတ် သံဃာဒိသိသ် အာပတ်မျိုးဖြစ်သဖြင့် သာမန်ဒေသနာကြား အာပတ်ဖြေရုံနှင့်မရ၊ ထုံးစံရှိသလောက် ရက်ချိန်ယူ၍ ပရိဝါသ်မာနတ် ဆောက်တည်ရသည်။ အမ္ဘာနတံဆောင် ရသည်။ ထို့ကြောင့် ရဟန်းတော် များသည် မာတုဂါမများနှင့် မထိမိအောင် သတိထားကြရသည်။ သို့သော် အမှတ်တမဲ့ထိခြင်း၊ ကား၊ ရထားပေါ် စသည်တို့၌ တိုးဝှေ့မိခြင်း၊ ခြေတော်စုံကို ဦးခိုက်ရှိခိုးခြင်း၊ အာမိသ ဆက်သရာ ဆွမ်းလောင်းလှူရာ၌ လက်ချင်းထိခြင်းသည် ခြွင်းချက်သဘောနှင့် အာပတ်မှ လွတ်သည်လည်း ရှိပေသည်။
၀န္ဒန၀တ္ထုသ္မိံဣတ္ထိပါဒေ သမ္ပာဟိတွာ ၀န္ဒိတုကာ မာဝါ ရေတဗ္ဗာ၊ ပါဒါဝါပဋိစ္ဆာ ဒေတဗ္ဗာနိစ္စလေန၀ါ ဘ၀တဗ္ဗံ၊ နိစ္စလဿ ဟိစိတ္တေန သာဒိတောအနာပတ-၁၃၂ ရှိခိုးသောဝတ္ထု၌ မာတုဂါမတစ်ယောက်က ရဟန်း၏ခြေကို ဆုပ်ကိုင်၍ ရှိခိုးသည်ကို တားမြစ်ရ၏။ ရဟန်းက ခြေကိုသော်လည်း ဖုံးထားရမည်။ ဆုပ်ကိုင်ထိတွေ့၍ ရှိခိုးနေလျှင် မတုန်မလှုပ်( မလှုပ် မရှားနေ၍) သော်လည်း နေရမည်။ ခြေထောက်ကို ဆုပ်နယ်၍ ရှိခိုးနေသော မာတုဂါမ၏လက်မှ လွတ်ရန် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားသော်လည်း လွတ်မြောက်ရန်သာ လုံ့လထုတ်ခြင်းဖြစ်၍ အပြစ်မရှိဟုဆိုပေသည်။ ထိုအချက်ကို သတိပြု၍ ဆွမ်းခံရာ၌ သပိတ် ကပ်ခြင်း၊ ပေးလှူခြင်းတို့၌ လက်ချင်းထိသောအရာ ၊ ပရိတ်သတ်ထဲ၌ အမှတ်မဲ့လက်ကို ဆန့်တန်းရာ၌ မာတုဂါမ၏ ကိုယ်အင်္ဂါကို ထိမိသောအရာ၊ မိန်းကလေးကို ယောက်ျားလေးမှတ်၍ ကိုင်မိသောအရာ စသည်တို့၌လည်း အတူတူပင်ဖြစ်ပေသည်။
ဒါကြောင့် ရဟန်းတော်တွေဘက်ကလဲ ဘုရားရှင်ဟောပြခဲ့တဲ့ မာတုဂါမများနဲ့ ဆက်ဆံရမဲ့ နည်းလမ်းတွေ ကို အတိအကျ လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်သလို မာတုဂါမဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ကလည်း ကိုယ်ကြည်ညိုပြီး ရင်းနှီးသိကျွမ်းခင်မင် ချင်တာမှန်ပေမဲ့ လိုအပ်တာထက်ပိုတဲ့ ရင်းနှီးမှုမျိုးကို မဖြစ်စေဖို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တာ ပြောကြားခဲ့တာကို အားလုံး သိအောင် ကျနော် အောက်မှာ ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်…. ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
အာနန္ဒာသည် အမြော်အမြင်ကြီးစွာဖြင့် ရဟန်းတော်များနှင့် မာတုဂါမတို့ ဆက်ဆံရမည့် နောင်ရေး ကို တွေးမိလာလေသည်။ ရဟန်းတော်များမှာ “ပရူပဇီဝိပုဂ္ဂိုလ်” သူတစ်ပါးကို မှီ၍ အသက်မွေးကြသူ များဖြစ်သောကြောင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့် မာတုဂါမများနှင့်ကင်း၍လည်းမဖြစ်နိုင်။ ဆက်ဆံရမည် သာဖြစ်လေရာ ထိုမာတုဂါမများ (မိန်းမများ)နှင့် ဆက်ဆံသောအခါ၌ ရဟန်းတော်များအနေဖြင့် မည်သို့ မည်ပုံကျင့်ကြံရမည်၊ နေထိုင်ရမည်ဟူသောအချက်ကို မြတ်ဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိခိုက် လျှောက်ထား ထိုက်သည်ဟု တွေးတောမိသဖြင့် နိဗ္ဗာန်စံပျော်တော်မူခါနီး ကာလတွင် အရှင်အာနန္ဒာက ကပ်၍ လျှောက် ထားလေ၏။
မေး။ ။အရှင်ဘုရား၊ ရဟန်းတို့မည်သည် သူတစ်ပါး (ဒကာ ဒကာမများ) ကိုမှီ၍ အသက်မွေးကြရ သူများ ဖြစ်ပါသောကြောင့် မာတုဂါမများသည် ရဟန်းတော်များထံသို့ လာရောက်ဆည်းကပ်ကြ၊ လှူဒါန်းကြပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ရဟန်းတော်များ အနေဖြင့်မည်သို့ မည်ပုံ ကျင့်ကြံ၊ ဆက်ဆံရပါမည်နည်းဘုရား။
ဖြေ။ ။ ချစ်သား အာနန္ဒာ၊ ကိလေသာကို ပယ်ခွာလိုသော ရဟန်းသည် စည်းစောင့်ရန် လုံခြုံရာ ၌နေသော နွားကဲ့သို့ တံခါးလုံခြုံသောကျောင်း၌ ကိန်းအောင်း၍ နေရာ၏။ မာတုဂါမတို့ရောက်လာသော် လည်း အကြင်မျှလောက်သော ကာလပတ်လုံး မာတုဂါမတို့၏ အဆင်း ပုံသဏ္ဍာန်ကို မမြင်ရသေး။ ထိုမျှလောက်သော ကာလပတ်လုံး (မမြင်တွေ့ရသေးသရွေ့) မာတုဂါမတို့၏ရုပ်အဆင်းကို မမြင်မချင်း ရုန်းရင်းတပ်မက်သော ရာဂသည်ဖြစ်လွယ်၏။ ထိုကြောင့် မာတုဂါမကို မမြင်ရာ၌ နေခြင်းသည်သာလျှင် ပဋိပတ်ကျင့်စဉ် ဖြစ်သတည်း။ မာတုဂါမတို့နှင့် မတွေ့မမြင်အောင်နေကြကုန်လော့။
မေး။ ။ အရှင်ဘုရား၊ အကယ်၍ ဆွမ်းခံလေသော အခါမျိုး၊ လှူဖွယ် ဝတ္ထုကို လှူလာသော အခါမျိုးတို့ ၌ မြင်ချေမူကား အဘယ်သို့ကျင့်အပ်ပါသနည်း ဘုရား။
ဖြေ။ ။ ချစ်သားအာနန္ဒာ၊ အကယ်၍ မာတုဂါမကို မြင်တွေ့ငြားအံ့၊ စကားမပြောပဲ နေခြင်းသည် ပင် မြတ်သော ပဋိပတ်၊ မြတ်သောဆက်ဆံရေးကျင့်စဉ်ဖြစ်၏။ ချစ်သား အာနန္ဒာ၊ ယောက်ျားတစ်ယောက် သည် ထက်စွာသော သံလျက်(ဓါး) ကိုကိုင်လျက် “ငါနှင့် စကားပြောခဲ့သော်၊ ဆိုခဲ့သော်၊ သင့်ခေါင်း ကို ဖြတ်ပစ်မည်၊ (သင့်ကိုသတ်ပစ်မည်)၊” ဟူ၍ဆိုလေအံ့။ ဦးခေါင်းကို အဖြတ်ခံ၍ စကားပြောခြင်းသည်၊ ဆိုခြင်းက မြတ်သေး၏။ မာတုဂါမတို့အား စကားပြောခြင်းသည် မမြတ်လေ။ တစ်ဖန် ငါ့ကို ခေါ်ပြောခြင်း မပြုပါလျှင် သင်၏အသားကို လှီး၍စားပစ်မည် ဟုဆို၍ အနားသို့တွင်လာရပ်သော ဘီလူးမအား စကားပြောခြင်းသည် မြတ်သေး၏။ ချစ်ဖွယ်ရှိသော မာတုဂါမတို့အား စကားပြောခြင်းသည် မမြတ်။
ချစ်သားအာနန္ဒာ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ မာတုဂါမတို့နှင့် စကားပြောရသည်ရှိသော် ချစ်ကျွမ်း ဝင်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ ချစ်ကျွမ်းတဝင် ရာဂဖြစ်လာသည်ရှိသော်၊ အထူးထူးသောကိစ္စကို ကြံခြင်းဟူသော- သင်္ကပ္ပ ရာဂဖြစ်၏။ ယင်း သင်္ကပ္ပရာဂဖြစ်သည်ရှိသော် တဏှာ ဥပါဒါန်တို့သည်ဖြစ်လာကုန်၏။ ထိုတဏှာ၊ ဥပါဒါန်တို့ဖြစ်လာကုန်သည်ရှိသော် သီလပျက်စီးခြင်း၊ ညစ်နွမ်းခြင်းရောက်၍ အပါယ်လေးပါးသို့လားရ မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မာတုဂါမတို့အား စကားပြောခြင်းသည် မမြတ် ဟု ငါဘုရားမိန့်တော်မူသ တည်း။
မေး ။ ။အရှင်ဘုရား၊ မာတုဂါမတို့သည် သူတို့သိလို၊ စပ်စုလို၊ မေးမြန်းလိုသောပြဿနာ အထွေထွေ တို့ကို မေးလျှောက်ရန် ကျောင်းသို့ လာကြပါကုန်လိမ့်မည်။ ကျောင်းမှ မပြန်ဘဲ တစ်နေကုန် တစ်နေခန်း မေးမြန်းခြင်းပြုချင် ပြုကြပါကုန်လိမ့်မည်။ ဥပုသ်သီတင်း စောင့်သုံးဆောက်တည်လိုကြ၍ သီလတောင်းချင်လည်း တောင်းပန်ကြပါလိမ့်မည်။ ရဟန်းတို့၏ ပြုဖွယ်ကိစ္စအဝဝကိုလည်း ကူညီ၍ လုပ်ကိုင်ပေးခြင်းပြုချင်လည်း ပြုကြပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် စကားမပြော၊ တုံဏှိသော နှုတ်ဆိတ် ၍နေပါလျှင် “ရဟန်းတို့သည် ဆွံအကုန်၏၊ နားပင်းကုန်၏၊ လောကရေးရာ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံမှုကို ဘာမှ နားမလည်ကြကုန်” ဟုဆိုကြပါလိမ့်မည် ဘုရား၊ သို့ပါသောကြောင့် မလွဲသာ၍ မာတုဂါမများနှင့် စကားပြောရချေသော် အဘယ်သို့ နှလုံးသွင်းရပါမည်နည်း ဘုရား။
ဖြေ။ ။ ချစ်သား အာနန္ဒာ၊ ကျောင်းသို့ ရောက်လာကြသော မာတုဂါမများအား စကားပြောလိုသည်ရှိသော် မိဘအရွယ် ရှိသော၊ အမေအရွယ်လောက်ရှိသူများကို ငါ့မိဘ၊ ငါ့အမေ ဟုနှလုံးသွင်းကြကုန် (စိတ်ကို ထားကြကုန်)။ ညီမအရွယ်၊ အစ်မအရွယ် မျှလောက်ရှိသူများအား “ငါ့နှမ၊ ငါ့ညီမ၊ ငါ့အစ်မ” ဟူ၍ လည်းကောင်း နှလုံးသွင်းကြပါကုန်၊ စိတ်ကိုထားကြပါကုန်။ သမီးအရွယ်ရှိသူများအား “ငါ့သမီး” ဟူ၍ အမှတ်ထား၍ ဆက်ဆံ ပြောဆိုကြပါကုန်။ ချစ်သား အာနန္ဒာ၊ မာတုဂါမတို့နှင့် စကားဆိုပြောရသော အခါမျိုး၌ အထူးသဖြင့် သတိကြီးစွာ ထား၍ ဆက်ဆံကြကုန်လော့။
ဤကား ဗုဒ္ဓ ပရိနိဗ္ဗာန်စံခါနီး သြဝါဒပေးထားခဲ့သော မာတုဂါမတို့နှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနည်း တစ်နည်းပင်ဖြစ်လေသတည်း။
ရှင်စောပုမိဘုရားကြီးက ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားခါနီး သူ့ အချွေအရံများ ကိုပြောနေသည်မှာ-"ထိပ်ထား တစ်ခုသတိပေးချင်သေးတယ်။ သမီးတော်တို့ရော သေသေ ချာချာနားထောင်ကြနော်။ ယခုမယ်မယ်တို့ သွားရမှာက ရဟန်း တော်တွေ သတင်းသုံးတဲ့နေရာ၊ မယ်မယ်တို့ ချယ်သထားတာက တကယ့်ပွဲလမ်း သဘင်သွားမဲ့အတိုင်းပဲ။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ အမူအရာ တွေဟာ ဆန့်ကျင်
ဘက်ဖြစ်တဲ့ ပုရိသ တွေ ကို ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ အဆန်းတကြယ် ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုက ညှုိ့ယူလိုက်တဲ့ အတွက် သူတို့မှာ ပူလောင်တဲ့ဆန္ဒ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။
ဒီလို သူ့စိတ်ကို အမှောင်လွှမ်းသွားတာနဲ့ တပြိုင်နက် သူ့မှာ အပြစ် ဖြစ်ရသလို သူ့ကို ပူလောင်အောင် ဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းမမှာလည်း တန်းတူ အပြစ်ဖြစ်ရတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့အနေအထိုင်ကြောင့် တပါးသူတစ်ဦးကိုဘယ်တော့မှ အမှောင်မလွှမ်းသွားပါစေနဲ့။
သမီးတော်တို့...ရဟန်းတော်တွေဆိုတာကလည်း အာသဝေါကုန်ခမ်းကြသေးတာမဟုတ်ဘူး။ ပုထုဇဉ် တွေ ဘဲ့ဖြစ်လို့ ပြာဖုံးနေတဲ့ မီးခဲတွေပါပဲ။ ဒီမီးခဲတွေကို သမီး တော်တို့ရဲ့ တပ်မက်စရာ ရူပါရုံဆိုတဲ့ လေပြေတစ်
ချက်မွေ့လိုက်ရင်.....ထိပ်ထားမဆက်ပါရစေနဲ့တော့ကွယ်.....။ ဒါကြောင့် သင့်တင့်ရုံပဲပြင်ဆင်ကြ။ ခေါင်း ကပန်းတွေဖြုတ်လိုက်။ မှုံနံ့သာတွေကိုလည်းဖျက်လိုက်ကြပါဦး။ လုံလုံခြုံခြုံ ဝတ်ဆင်ပြီး မြင်ရသူ စိတ်ထဲ မှာ နှမငယ် သမီးငယ်တစ်ယောက်လို ကရုဏာပွားလာအောင် ပြောဆိုဆက်ဆံကြပါကွယ်။"
FB Khin Thandar